कर आतंकको विषयमा किन बोल्न सक्दैन सरकार ?
Tuesday, 21 Aug, 2018 3:50 PM
अहिले देशैभरि करको आतंक छ । आतंक दुई प्रकारको छ । एउटा कर बढी लिएर आतंक छ । अर्को करको बारेमा हौवा खडा गरेर आतंक मच्चाइएको छ । यी दुई आतंक खडा गर्ने काममा प्रतिपक्षले जोड दिनु स्वाभाविक नै हो । प्रतिपक्षले गर्ने राजनीति नै यही हो । तर, विडम्वना यसमा सत्ता पक्षका कार्यकर्ता पनि थोरै छैनन् । यस बीचमा सरकारले अध्ययन कार्यदल गठन गरिसकेको छ । दोहोरो भए फिर्ता गरिने विश्वास अर्थमन्त्रीले ब्यक्त गरेका छन् । अनुचित करलाई सच्याइने भनेर प्रधानमन्त्रीले पनि भनिसकेका छन् । घोराही उपमहानगरपालिकाले करको दरलाई घटाइसकेको छ । अरु कैयन् नगरपालिकाहरुले निःशुल्क सिफारिसको प्रचार गर्न थालेका छन् । तथापि, करविरोधी आन्दोलन चर्कदै गएको छ । नेपाली कांग्रेस आन्तरिक कलहमा फसेको बेलामा सो कलहलाई मत्थर पार्ने बहानाबाजी पनि यसैलाई बनाइएको छ ।
निश्चयनै कर बढी लिनु अनुचित हो । यद्यपि, कति कर लिनु उचित र कति अनुचित भन्नका लागि मापदण्ड बनेको अवस्था छैन । त्यसैले जति लिए पनि त्यसको विरोध गर्दा सार्थक नै मानिन्छ । अर्थात्, कर लिने वैज्ञानिक आधार बनेको छैन । यस्तो अवस्थामा विगतको भन्दा केही प्रतिशत बढाउनुलाई नै मुख्य आधार मान्ने गरिएको छ । यसमा जनताको गुनासो जायज पनि छ । तथापि, कर नलिई कुनै सरकार चल्नेवाला छैनन् भन्ने कुरा पनि उत्तिकै सत्य हो । हिजोका दिनमा मूल्य अभिवृद्घि करलाई स्थापित गर्न पनि कम सकस भएको थिएन । त्यसैले यस विषयमा कुनै निष्कर्षमा पुग्नु भन्दा अघि स्थानीय सरकारप्रति जनताको वितृष्णा किन जाग्यो ? सरकारले गरेका कतिपय राम्रा कुराको प्रचार पनि किन हुन सकेन ? स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर जाने प्रतिनिधिहरुले आफ्ना कुरा किन जनस्तरमा लैजान सकेनन् भन्नेतर्फ समीक्षा गर्न जरुरी छ । वास्तवमा करविरोधी भावना जसरी उत्पन्न भएको छ, त्यसको खण्डन र प्रतिरक्षा पनि दुईतिहाइको सरकारले प्रभावकारी ढंगले हुन सकेको छैन ।
पछिल्लोपटक धेरै सिफारिसहरु निःशुल्क हुँदा रहेछन् भन्ने पनि देखिएको छ । कतिपय नगरपालिकाले लेटरप्याडमै सूचना प्रकाशन गरेका छन् । कतिपयले अतिरञ्जनापूर्ण प्रचार पनि गरेका छन् । कर आतंक छ तर, तिनको तथ्यगत समाचार भन्दा हुलले गर्ने काम बढी भएको छ । घरको नक्सावापत पैसा लिन थालेको आजदेखि हैन । तर, यसलाई पहिलोपटक शुरुवात गरेको भनेर प्रचार गरिएको छ । अण्डा बिक्री गर्नेले व्यवसाय कर तिर्छन् । कुखुरा पाल्नेले पनि व्यवसाय कर तिर्छन् । तर यिनलाई यसरी प्रोपोगण्डा गरियो कि संघीयता र वर्तमान सरकारका कारणले यो सब भएको हो ।
कर अरु कारणले पनि बढेका छन् । तत्कालीन गाउँपालिकाले भीर पाखाको न्यूनतम कर लिन्थे भने अहिले तिनै भीर पाखा नगरपालिकामा रुपान्तरण भएका छन् । नगरहरु उपमहानगरपालिका र उपमहनगरहरु महानगरमा रुपान्तरण भएका छन् । यस्तो अवस्थामा करको दर स्वभावैले बढेको छ । स्वभावैले यस कारणले कि गाउँ र नगरको करमा हिजोदेखि नै धेरै फरक थियो र छ । साविक नगरमा बसेकालाई त्यही कर ठिक हुने र नगरमा नयाँ प्रवेश भएकोलाई बेठिक हुने अवस्था पनि छ । त्यसैले किन यतिबिघ्न चर्काइएको छ त करको विषयलाई ? यसबारेमा केही चर्चा गर्ने कोशिश गरिएको छ ।
जनस्तरमा स्थानीय सरकारले जनतालाई निःशुल्क सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान छ । यसका लागि कतिपय अवस्थामा चुनावका बेला गरिएका सम्भव असम्भव आश्वासनहरु पनि जिम्मेवार छन् । सरकारका सीमितता हुन्छन् भन्ने कुरालाई बुझाउन नसक्नु पनि एउटा कारण हुन सक्छ । सोही कारणले प्रतिनिधिले विनासित्ती सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन विकास भएको छ । विगतमा जनआन्दोलनहरु हुँदा कहिलेकाँही कर नतिर्न र बिजुली पानीको बिल नतिर्न सार्वजनिक आह्वान गरिएको हुन्थ्यो । जब आन्दोलन सफल हुन्थ्यो जरिवानासहित तिर्नुपर्दथ्यो । अनि व्यवसायीहरु आफूसमेत संलग्न आन्दोलन र नेतृत्वलाई गाली गरेर चित्त बुझाउँथे । कतिपय नीतिगत कुरालाई चाहेर पनि बदल्न सकिँदैन । अहिले पनि त्यस्तै भएको छ । एकातिर चुनावमा दौडधूप गरेर आफैँले चन्दा दिएर जिताएका सरकारले कर लगाएकोमा जनता सहमत हुन सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतिर प्रतिपक्षले जे भन्दा जनताको मनोविज्ञानलाई भड्काउन सकिन्छ त्यही गरेर भड्काउने प्रयत्न गर्नेनै भए । स्थानीय सरकारहरुले जुनसुकै सरकार भएपनि कर तिर्नुपर्छ र तिर्नुपर्दथ्यो भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउन सकेका छैनन् ।
स्थानीय तहमा करको वृद्घि कम्युनिष्ट पार्टी, कांग्रेस वा मधेसी दल जो भए पनि गरेकै छन् । तथापि, आरोप भने नेकपाको संघीय सरकारलाई लगाइएको छ । अथवा कम्युनिष्टले कर लगाएर जनताको ढाड सेकेको भनिएको छ । कर त हिजोका दिनमा धेरैजसो कांग्रेसले नै लगाएको थियो । तर, यतिबेला जनताले यो कुरा भुलिसकेका छन् । यसबीचमा कांग्रेसले आफूले जितेको ठाउँमा सर्कुलर जारी गरेर कर फिर्ता गर्न भनेको छ । यसले राजनीति कति असहिष्णुतातर्फ गइरहेको छ भन्ने संकेत गर्दछ । कर नलिइ संसारमा कुनै सरकार चलेका उदाहरण छन् भने भन्नुप¥यो हैन भने कर नलिने घोषणा आफैँमा भद्रगोले व्यवस्था हो । यसले सबैभन्दा ठूलो फाइदा नाफाखोरहरुलाई हुन्छ । अवैध कारोबारियालाई हुन्छ । भ्रष्टहरुलाई हुन्छ । के कांग्रेसले यही गर्न खोजेको हो ? राज्यले नसक्नेलाई सुविधा दिने, विकासका काम गर्ने कर असुलेरै हो । कर नलिनु भनेको कल्याणकारी काम नगर्नु पनि हो । यही हो भने भोलि भ्रष्टहरुलाई कारबाही गर्नु हुन्न भनेर सडकमा आउने ? अनियमिततालाई प्रश्रय दिनुपर्छ भनेर सडकमा आउने ? कसैलाई कानुनी कारबाही नगर्ने हो भने कसरी कानुनको शासन लागू हुन्छ ? कसरी सुशासन कायम हुन्छ ? त्यसैले करको निरपेक्ष विरोध गरेर कांग्रेसले लोकतन्त्रकै धज्जी उडाएको छ ।
आखिरी कर त पहिला पनि लिइन्थ्यो । कुरा यति मात्र हो कि त्यतिबेला धेरैजसो कर केन्द्रीय सरकारका निकायले संकलन गर्थे । सम्पत्ति कर, घरवहाल कर, जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, मनोरञ्जन कर आदि पहिला केन्द्रले संकलन गर्दै आएको थियो भने मालपोत, सेवाशुल्क, विज्ञापन कर स्थानीय तहमा संकलन हुन्थ्यो । फरक के हो भने हिँजो यी कर अलग अलग कार्यालयमा अलगअलग समयमा तिर्थे, अहिले सवै कर एकीकृत करको रुपमा स्थानीय तहमा तिर्नुपर्छ । एकै चोटि एकै ठाउँमा तिर्दा रकम ठूलो देखियो । तर ती नयाँ कर भने हैनन् । यही कुरा वुझाउन सकिएको छैन ।
संघीय सरकारले कैयन् ठाउँमा अत्यन्तै राम्रा कामको सुरुवात गरेका छन् । आवधिक योजना वनाउनेदेखि तत्काल गर्नुपर्ने शिक्षामा सुधार गरिएका छन् । स्वास्थ्यसेवालाई सुदृढ गरिएको छ । रोजगारीका अवसर पहिचान हुँदै छन् । प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइएको छ । स्वरोजगार तालीममार्फत् सुखानुभूति गरिदैछ । जनताको पहुँचमा ब्यापक सुधार आएको छ । तर, यी सवै कुरालाई आवश्यक प्रचार गर्न सकिएको छैन । मिडियालाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गरिएको छैन । काम गरेपछि मिडियाले खोजेर आफै लेख्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले काम गरेको छ । उस्तै परे प्रतिक्रिया दिन पनि धौ धौ मान्ने परिस्थिति छ । साना साना कुरामा पनि प्रधानमन्त्री आफैँले बढी बोलेर आलोचित भएका छन् । पार्टी एकीकरण भएर पनि सरकारमा बसेका मन्त्रीहरु अलग अलग पार्टीका जस्ता हुन् कि भन्ने धारणा छ । स्थानीय तहहरुले आवश्यक समन्वय पनि गरेका छैनन् । एक आपसमा छलफल गरेर पनि धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ । तर, उनीहरुमा एक प्रकारको लिगलिगको दौड चलेको छ । पहिलो हुनका लागि गरिहालौं भन्ने छ । यस प्रकारको अभ्यास पहिलोपटक भएकोले धेरै कुरा सिकेर लागु गर्नु पर्दथ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गर्नुपर्दथ्यो । यस्तो अध्ययन गर्न कँही जानु पर्दैन । एउटा विज्ञको टिम खडा गरिदिए हुन्थ्यो ।
पार्टी कमिटी निष्क्रिय हुनु
करकोवारेमा जेजस्ता भ्रमहरु उत्पन्न भएका छन् त्यसको कारण कर शिक्षा नहुनु पनि हो । यद्यपि, यो कुरालाई केन्द्रले पनि हेक्का राख्न जरुरी छ । करवाट उठ्ने रकमको एक एक पैसाको हिसाव किताव स्थानीय तहहरुले जनसमक्ष राख्ने प्रतिवद्घता गर्न जरुरी छ र कर शिक्षालाई जनस्तरमा लैजाने वातावरण वनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।